Mampitahainay ny fakantsary an'ny iPhone 5s sy iPad Air | Vaovao IPhone
Miaraka amin'ireo fitaovana roa Apple andrasana indrindra amin'ny taona eny an-tsena, maro ireo sary atolotra antsika sy toetra marobe diniho amin'ny hevitra sy fampitahana samihafa. Androany dia anjaran'ny fakan-tsary eo alohan'ireto fitaovana roa mahafinaritra ireto no natolotry ny orinasa apple antsika tato ho ato ary tsy namela na iza na iza tsy hiraharaha.
Araka ny fantatsika, samy manana fakantsary iSight izy roa, na dia tsy mitovy megapixel aza. Ao amin'ny iPad Air mahita fakan-tsary 5MP isika (toy izany koa no mitranga amin'ny iPad mini) raha oharina amin'ireo 8 megapixels an'ny iPhone 5s. Na izany aza, ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo dia tsy dia be loatra, araka ny ho hitantsika any aoriana. Tsy misy isalasalana fa Apple dia nahavita asa tsara tamin'ny fakantsary misy ny fantsona roa, izany no vokany.
1 Saripika ankapobeny isan'andro
2 Sary amin'ny maody Macro
3 Sary HDR
4 Sary hazavana maivana
Saripika ankapobeny isan'andro
Raha ny sary nobahan'ny ankamaroantsika amin'ny fiainantsika andavanandro, izay tsy mitaky marimarina na mitady ny sary tonga lafatra, dia mandeha tsara ny fitaovana roa tonta. Mazava ho azy, ny sary nalaina tamin'ny iPhone dia ho zavatra foana ambony ho an'ireo an'ny iPad fa raha, na inona na inona antony, tsy manana ny iPhone eo an-tànantsika isika ary manana ny iPad Air ihany, dia ho ampy hanatanterahana ny tanjontsika izany. Ny iray amin'ireo lafiny manamarika indrindra dia ny mampifanitsy ny mazava tsara kokoa noho ny teo alohany. Ohatra tsara amin'ny fomba hiara-miasa ny fitaovana sy ny lozisialy, vokatra lehibe no azo.
Avy eo ankavia sy havanana: iPad Air, iPhone 5s
Sary amin'ny maody Macro
Amin'ity maody ity dia tena tsara ny fihetsiky ny fantsona roa, na dia tokony homarihina aza fa ny iPhone 5s dia mahavita mandanjalanja tsara kokoa loko Amin'ny sary. Afaka hitantsika izany amin'ny sary voalohany, izay misy ny lokon'ny sisin-dàlana eo amin'ny zoro ankavanana manana feo mahatoky kokoa amin'ny zava-misy amin'ny iPhone 5s.
Eto dia mbola ara-drariny ihany ny zava-drehetra, na dia mbola ambony kely aza ny iPhone 5s, miseho mahatoky kokoa inona no apetraka eo anoloan'ny fakantsary.
Sary hazavana maivana
Eto, farany, ny fahasamihafana misy eo amin'ny fitaovana roa dia mazava. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny iray sy ny iray hafa dia masiaka, mandresy amin'ny iPhone 5 be dia be. Azontsika jerena amin'ny masonkarena ahoana ny »tabataba»Tena tsara dia tsara tokoa amin'ny sary nalaina niaraka tamin'ny iPad Air, porofo manamarina ireo sary nalaina tamin'ny iPhone, izay misy fivoarana mahatsiravina amin'ny kalitaony. Raha toa isika ka maka sary marobe amin'ny hazavana ambany dia tsara kokoa raha miaraka amin'ny iPhone.
Ny sary rehetra dia namboarina tamin'ny safidy default sy ny autofocus, mamela ny fitaovana hanao ny asa rehetra.
Fanazavana fanampiny - iPhone 5 amin'ny halaliny, efijery (III)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » iPhone 5s vs. iPad Air, fakantsary iSight [gallery]
Ny kalitaon'ireo sary navoaka dia tsy azo ankasitrahana tsara. Manome soso-kevitra kaody galerià HTML5 aho, mba hisokafan'ny sary amin'ny habeny sy ny kalitaony mahazatra! Araka ny hevitro
Ismoso dia hoy izy:
Adala matavy izaitsizy vao navotsotra.
Valiny tamin'i Ismoso
Fakan-tsary tena tsara! Ho eo amin'ny haavon'ny iphone 5 no kajiko, noheveriko fa ho ratsy nefa toa maka sary tsara 😀
Fampianarana: Ahoana ny fomba hitahirizana carte de crédit amin'ny iPhone miaraka amin'ny iCloud Keychain